Izimpendulo Zezokwelapha Nge-CBD ne-Delta 8 THC
Imibuzo Yezokwelapha Nezimpendulo Mayelana ne-Delta 8 THC ne-Delta 10 THC Kusuka Ku-Web Yonkana
Kubukezwe ngu-Neha Pathak, MD ngoJulayi 08, i-2021
Isindatshana Sithunyelwe Ekuqaleni https://www.webmd.com/mental-health/addiction/what-is-delta-8
Ngabe iqhathaniswa kanjani nensangu ejwayelekile (Delta-9-THC)?
Ingabe i-Delta-8 isemthethweni?
Ngabe Uzovivinya i-Positive ye-THC?
I-Delta-8 THC (noma i-Delta-8-tetrahydrocannabinol) iyinhlanganisela yamakhemikhali eyenzeka ngokwemvelo ebizwa nge-cannabinoid etholakala ngemikhondo emincane yezitshalo ze-hemp nensangu (insangu). Ukuthandwa kwayo kuyanda, futhi ungakuthola yonke indawo kusuka ezikhungweni zemithi yokhula lwezitolo kuya kwamashalofu ezitolo.
Kungani kunesidingo esikhula kangaka seDelta-8? Okokuqala, ukwakheka kwawo kwamakhemikhali kuyefana nokwumzala wakhe owaziwayo, iDelta-9-tetrahydrocannabinol (Delta-9-THC), okuyinhlanganisela eyinhloko yokutholakala kwengqondo etholakala ensangu. Yilokho okwenza ube "phezulu."
Kokubili iDelta-8 neDelta-9 yizinhlobo ze-THC. Kepha lapho abantu bebhekisa ku-THC, imvamisa basho iDelta-9 etholakala ezindaweni ezinensangu kakhulu. Kokubili kuveza imizwa ejabulayo, engenangqondo, kepha iDelta-8 ibangela ukuphakama okuqinile.
Eqinisweni, iDelta-8 kuvame ukubizwa ngokuthi “insangu-lite” noma “ukhula lokudla.” Eminye imiphumela emibi ejwayelekile ye-THC efana ne-paranoia, ukukhathazeka kanye nokozela nayo ayinamandla kangako.
Ingabe iDelta 8 THC isemthethweni?
Esinye isizathu sokwanda kokuthandwa kweDelta-8 ukuthi, ngokungafani ne-THC elawulwa kakhulu, iDelta-8 isemthethweni ukusetshenziswa ezifundazweni eziningi. Kungenxa yokuthi ikhishwe kakhulu ku-CBD etholakala nge-hemp, esemthethweni ukulima ngaphesheya kwe-US
Kepha iDelta-8 ihlala endaweni empunga esemthethweni. Ubulungiswa bukaHemp buvela kulokho okubizwa ngokuthi yi-federal farm bill (i-Agriculture and Nutrition Improvement Act ka-2018), eyasusa i-hemp nemikhiqizo yayo ohlwini lwezinto ezilawulwayo. Isizathu: amazinga aphansi we-HC we-Hemp (ngaphansi kuka-0.3%). Umthethosivivinywa awusho i-Delta-8 noma kuphi. Abameli be-Hemp nabanye abayithengisayo basebenzise leli thuba ukumaketha ngokusemthethweni imikhiqizo ye-Delta-8, imvamisa ngaphandle kwemikhawulo yeminyaka. Ngenxa yalokhu, manje sekuwumkhiqizo okhula ngokushesha kakhulu embonini ye-hemp. Ungahlola isimo sezomthetho sesifundazwe sakho lapha: https://redemperorcbd.com/is-delta-8-thc-legal-in-my-state/
Ngoba kunokuhlolwa okuncane noma ukuhlolwa kwelebhu kokungena emikhiqizweni ye-Delta-8, amakhemikhali nabanye ososayensi banezinkinga zokuphepha. Imikhiqizo efakwe ilebula njenge-Delta-8 ingaqukatha ukungcola, kufaka phakathi amazinga aphezulu we-THC. Ngenxa yalokhu, cishe izifundazwe eziyishumi nambili, kufaka phakathi iNew York neCo
Ungathenga Imikhiqizo ye-Delta 8 THC ngaphezulu kwekhawunta eziteshini zegesi, ezitolo ezilula, ukhula, nezitolo ze-vape, naku-inthanethi. Zithengiswa njengama-gummies, amaswidi, I-Delta 8 vape cartridges, owoyela, okokuxuba, okudliwayo, amalunga, noma iziphuzo.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi akukho ukulawulwa kwekhwalithi yale mikhiqizo nohlu lwayo lwezithako. Kulula futhi ukudida imikhiqizo yeDelta-8 ye-CBD, engabangeli ukuphakama.
IDelta 8 Gummies 59.99 Iyathengiswa Ngo-39.99 Chofoza esithombeni Uku-oda isiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku eziyi-14.
Kukhona nokushoda kocwaningo nobufakazi uma kukhulunywa ngomthelela weDelta-8 empilweni yakho yonke. Abantu abaningi babike - ikakhulukazi ngokusebenzisa okuthunyelwe kwezokuxhumana - ukuthi basebenzisa i-Delta-8 kanye nemithi yabo kadokotela ukusiza ngokudangala nokusetshenziswa kwezidakamizwa. Abasebenzisi bathi iDelta-8 nayo inga:
Nciphisa ukukhululeka kobuhlungu
Thuthukisa impilo yengqondo
Vimbela ukuhlanza ngesikhathi sokwelapha umdlavuza
Kodwa-ke, ochwepheshe bathi lezi zinzuzo ikakhulukazi zisho ngomlomo futhi kunokuntuleka kocwaningo lokuthi luyithinta kanjani impilo yakho. Ukuthi ungayithenga usushe emashalofini akusho ukuthi ayinangozi ngokuphelele.
Abanye abantu babike imiphumela emibi efana nale:
Ukushaya kwenhliziyo okuhamba kancane (bradycardia)
Uma uzama imikhiqizo ye-Delta-8 bese ubona noma yikuphi kwalokhu kuphendula, tshela udokotela wakho ngokushesha. Uma kuyisimo esiphuthumayo, shayela u-911 noma uye esibhedlela esiseduze nawe. Uma ingane idla noma ivezwa emikhiqizweni ye-Delta-8, njengama-gummies noma amaswidi, thola usizo lwezokwelapha ngokushesha.
Kuya ngesimo. IDelta-8 uhlobo lwe-THC. Ukuhlolwa kwezidakamizwa kuvame ukubheka imikhondo ye-Delta-9, kepha i-Delta-8 ingavela njengelungile ku-THC. Noma ngabe yi-Delta-8 noma i-Delta-9, abantu nabo basabela ngendlela ehlukile kuma-cannabinoids kuya ngohlobo lwemikhiqizo abayisebenzisayo nokuthi bayisebenzisela isikhathi esingakanani.
Njengamanje, ukuhlolwa kwezidakamizwa zomchamo wokuhweba akuhlukanisi phakathi kwama-cannabinoids ahlukile. Ngakho-ke uma uzohlolwa ukuhlolwa kwezidakamizwa, kungcono ukugwema imikhiqizo ye-Delta-8.
Inkomba Yezokwelapha yeWebMD
Izimpendulo Zezokwelapha Ezivela Emhlabeni Wonke Wewebhu Mayelana ne-CBD
ekuqaleni kuthunyelwe ku-. https://collegian.csufresno.edu/2020/10/8-common-questions-and-answers-about-cbd-and-medical-marijuana/#.YSV07vpKg2w
Njengoba insangu yezokungcebeleka neyokwelashwa iya ngokuya iba semthethweni ezifundazweni ezweni lonke, ungahle uzibuze ukuthi umbuso wakho uzolandela nini futhi nini. Ngenkulumo engqubuzana nensangu ethola ukubambeka okuningi eminyakeni yamuva nje, abantu baphinde bathambisa isimo sabo se-hemp kanye nenye yama-cannabinoids adume kakhulu - i-cannabidiol (CBD).
Njengoba impilo ephelele iya ngokuya ithandwa futhi isiko le-cannabis ligcwele embusweni odumile, kunemibuzo eminingi ezungezayo mayelana nendawo yensangu emphakathini waseMelika. Qhubeka ufunde ukuze uthole izimpendulo zemibuzo ejwayelekile abantu abanayo mayelana nensangu yezokwelapha nemikhiqizo ye-CBD.
Omunye wemibuzo evame ukubuzwa ezingqondweni zabantu ukuthi "Iyini i-CBD?" Abantu abangajwayelene nayo futhi abazi kuphela ukuthi ivela ku-cannabis ivame ukuyidida ne-tetrahydrocannabinol (THC), okuyi-cannabinoid eheha kakhulu etholakala ensangu.
Umbuzo omkhulu kakhulu emiqondweni yabantu mayelana Imikhiqizo ye-CBD kungukuthi bazokukhuphula noma cha. Impendulo elula yalokhu ithi cha. Yize iyi-cannabinoid, ayikwenzi uzizwe uphakeme ngendlela ukhula olwenza ngayo. Eqinisweni, iphikisana ne-THC.
Ingabe insangu isemthethweni ezingeni likahulumeni?
Eminyakeni emihlanu edlule, kube nezifundazwe eziningi ezigunyaza insangu ekusetshenzisweni kwezokwelapha nokuzilibazisa. Lokhu kuguqulwa kwesimo sengqondo ngokhula kunikeze abathanda insangu abaningi ithemba lokuthi ukhula luzobhaliswa ngokusemthethweni ezingeni likahulumeni, kodwa lokhu akukenzeki okwamanje.
Ngenkathi izifundazwe eziningi zibhalise insangu yezokwelapha kanye nensangu yokuzijabulisa, kusengavumelekile ezingeni likahulumeni. Ngenxa yalokhu, osomabhizinisi abaningi ezifundazweni lapho insangu isemthethweni khona bayayeka ukungena kwi-canna-business.
Ngenkathi kube nokukhuluma okuningi, kusenabantu abaningi abangazazi izinzuzo zezempilo zokusebenzisa i-CBD. I-Cannabidiol isetshenziselwa ukugula okuningi okufana nobuhlungu obungapheli nekhanda. Abantu futhi bayisebenzisa kokhilimu abasebenza ngezihloko ze-psoriasis ne-eczema ngoba iyasiza ngokuvuvukala. Abanye ochwepheshe baze bakholelwe ukuthi kungaba yindlela ephumelelayo yokwelapha ukucindezeleka nokukhathazeka.
Uyithatha kanjani imikhiqizo ye-CBD?
Kunezindlela ezahlukahlukene zokuthatha lesi sengezo. Noma kungakukuphakamisi ngendlela ukhula olwenza ngayo, abanye abantu bakhetha ukuyibhema njengendlela yokwelapha ukukhathazeka. Amaconsi e-CBD athandwa kakhulu ngabantu abawasebenzisela ukwelapha i-arthritis nezinhlungu ezingapheli. Abanye abantu baze bayisebenzise njengesithako ekuphekeni kwabo esikhundleni seoyile yemifino namantongomane. Ungathola futhi lesi sithasiselo njenge-tincture noma i-salve yama-topical.
4. Ngabe iMedicare iyayifaka yini Imikhiqizo ye-CBD?
Omunye umbuzo ovame ukubuzwa abantu ngothi "Ngabe iMedicare iyayifaka insangu yezokwelapha?" Njengoba ufundile phambilini, insangu isengavumelekile ezingeni likahulumeni futhi ngoba iMedicare iyindlela yomshuwalense womphakathi, ayihlanganisi insangu yezokwelapha.
Ngokwethembeka, ungaba nenkinga yokuthola umhlinzeki womshuwalense ozokhipha incwadi yakho yensangu. Ngenxa yenhlamba ezungeze ukusetshenziswa kwensangu, mhlawumbe kuzothatha isikhashana ngaphambi kokuba izinkampani zomshuwalense zizame ukuya khona. Ngakho-ke, cabanga izindleko ezingaphandle kwesikhwama ngaphambi kokusebenzisa noma iyiphi insangu yezokwelapha noma imikhiqizo ye-CBD.
5. Iyini insangu yezokwelapha ebekelwe yona?
Yize ukusetshenziswa kwensangu kunganakiwe ngabathile, kusetshenziselwa ukwelapha uhlu olude lwezifo, okunye ngokomzimba kanti okunye ngengqondo. Odokotela bayisebenzisela ukwelapha i-schizophrenia, umdlavuza, ukulahlekelwa isifiso sokudla, ukuqwasha, ukuqubuka, ukuqina kwemisipha nokuphathwa kobuhlungu.
I-Broad Spectrum CBD 79.99 iyathengiswa ngo-49.99
Ngabe ngizokwazi ukuthola umsebenzi uma ngisebenzisa insangu yezokwelapha?
Ukukhathazeka okukhulu ngeziguli ezisensangu yezokwelapha ukuthi ngabe kuzokuthinta yini noma cha ukufaneleka kwazo emsebenzini. Amabhizinisi avunyelwe ukuwuhlolela futhi enze abantu bangafaneleki ukuthola umsebenzi wokusetshenziswa kwensangu, ngisho nensangu yezokwelapha. Uma usebenzisa insangu yezokwelapha ekhaya, into engcono kakhulu ongayenza ungalokothi uze uzosebenza phezulu noma uvumele ukuthi usebenzise insangu.
Ingabe i-CBD inemvume yokwelashwa nge-FDA?
Imikhiqizo ye-CBD ayikahlolwa yi-FDA ukwelashwa kwanoma yiziphi izifo noma ukugula. Lokho akusho ukuthi i-CBD ayisebenzi - kumane kusho ukuthi abantu abavunyelwe ukwenza izimangalo zezokwelapha mayelana nekhono layo lokuthola noma ukwelapha noma yiziphi izifo. Noma ungathenga i-CBD kalula ngaphezulu kwekhawunta, kufanele uthintane nodokotela wakho ngaphambi kokuyisebenzisela izinhlungu noma enye inkinga yezokwelapha.
Ingabe uwoyela we-CBD ulungele isikhumba?
Kuthunyelwe ekuqaleni ku-https: //www.medicalnewstoday.com/articles/cbd-oil-for-skin
I-Cannabidiol (i-CBD) iyinhlanganisela yemvelo etholakala esitshalweni se-cannabis. Obunye ubufakazi busikisela ukuthi uwoyela we-CBD ungaba lusizo empilweni yesikhumba futhi usetshenziselwe izimo ezahlukahlukene zesikhumba.
I-CBD iyinhlanganisela yamakhemikhali ekhona I-Cannabis Sativa isitshalo. Abakhiqizi bangahlanganisa i-CBD namafutha, njenge-hemp noma uwoyela kakhukhunathi, ukudala uwoyela we-CBD. Abantu bangathenga uwoyela we-CBD noma uhla lwemikhiqizo yobuhle efaka uwoyela we-CBD ongawusebenzisa esikhunjeni sabo.
Ngenxa yezindawo zayo ezinamandla okulwa nokuvuvukala, i-CBD ingaba wusizo ekwelapheni izimo eziningi zesikhumba, kufaka phakathi induna, i-eczema ne-psoriasis.
Kulesi sihloko, sizoxoxa ngokuthi uyini uwoyela we-CBD, yiziphi izimo zesikhumba ezingaba wusizo kuzo, nokuthi uwusebenzisa kanjani uwoyela we-CBD.
Ngabe i-CBD isemthethweni? Imikhiqizo ye-CBD eyenziwe ngeHemp engaphansi kuka-0.3% iTHC isemthethweni ngokuhlanganyela kodwa kodwa akukho emthethweni ngaphansi kweminye imithetho yombuso. Ngakolunye uhlangothi, imikhiqizo ye-CBD etholakala nge-cannabis ayikho emthethweni ngokuhlanganyela kodwa ngokomthetho ngaphansi kweminye imithetho yezwe. Hlola umthetho wendawo, ikakhulukazi lapho usohambweni. Futhi, khumbula ukuthi i-Food and Drug Administration (i-FDA) ayivumanga imikhiqizo engabhalisiwe ye-CBD, engabhalwa ngokungalungile.
I-CBD ingenye yama-cannabinoid amaningi atholakala esitshalweni se-cannabis. Enye i-cannabinoid ephawulekayo yi-delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). I-THC iyinhlanganisela ebhekele “phezulu” abantu abangayihlanganisa nensangu. I-CBD iyodwa ngeke ibangele ukuthi umuntu azizwe ephakeme.
Funda kabanzi ngomehluko phakathi kwe-CBD ne-THC lapha.
Izinhlobo ezahlukahlukene zezitshalo ze-cannabis ziqukethe amazinga ahlukene we-cannabinoids. Imvamisa, izitshalo ze-hemp ziqukethe i-CBD eningi kakhulu futhi cishe ayikho i-THC, yingakho uwoyela omningi we-CBD uvela ku-hemp yezimboni.
Funda kabanzi ngomehluko phakathi kwe-hemp CBD ne-cannabis CBD lapha.
Imvamisa, abenzi bazosebenzisa ukushisa ukukhipha i-CBD esitshalweni se-cannabis bese beyixuba nophethiloli othwala ukukhiqiza uwoyela we-CBD. Abanye bangasebenzisa utshwala ukwakha ifayili le- I-CBD tincture.
Uwoyela we-CBD uza ngamandla amaningi ahlukene, futhi abantu bangawusebenzisa ngezindlela eziningi ezahlukene. Isibonelo, bangayigcoba ngqo esikhunjeni, bafaka ithonsi ngaphansi kolimi lwabo, noma bangeze okhilimu noma ama-lotion.
Umzimba womuntu uqukethe inethiwekhi eyinkimbinkimbi yama-neurotransmitters kanye ne-cannabinoid receptors eyaziwa njenge-endocannabinoid receptor system (ECS)Umthombo Othembekile. Ucwaningo luphakamisa ukuthi ama-cannabinoids ne-ECS angadlala indima ezinqubweni eziningi zomzimba nokuthi isikhumba siqukethe ukwethenjwa Umthombo ama-cannabinoid receptors.
Ingabe kuyasisebenzela isikhumba?
UcwaningoUmthombo Othembekile kusikisela ukuthi uwoyela we-CBD ungazuzisa ngezimo ezahlukahlukene zesikhumba. Lokhu kungafaka:
Izinduna yisimo sesikhumba esivame ukwethenjwa Umthombo kubantu. I-CBD iqukethe izinto eziningi ezinciphisa uwoyela, ezilwa nokuvuvukala, nezakhiwo ezilwa namagciwane ezingasiza ekuthuthukiseni izinduna.
Ucwaningo lwango-2014 lwethenjwa Umthombo ihlolisise imiphumela ye-CBD kuma-sebocyte womuntu. Lawa ngamangqamuzana akha i-sebum, okuyi-waxy, into enamafutha isikhumba esikhiqizayo.
Ngenkathi i-sebum isiza ukuvikela isikhumba sethu, i-sebum eyeqile nayo ingadala induna. Ucwaningo lukhombisa ukuthi i-CBD ingavimbela ama-sebocyte ekudaleni i-sebum eningi kakhulu.
Ukubuyekezwa kwango-2016 kuthenjiwe Umthombo iphawula amandla okulwa ne-antibacterial kanye ne-antifungal esitshalo se-cannabis. Lokhu kungasiza ukuvimbela izinduna ngenxa yokutheleleka esikhunjeni.
Ucwaningo lwango-2019 luphakamisa ukuthi i-CBD ingasiza futhi ekwelapheni ukubukeka kwezibazi zomqubuko.
Funda kabanzi nge-CBD nezinduna lapha.
A Ucwaningo luka-2019 luthembekile Umthombo uphawula ukuthi i-CBD ingaba wusizo ekwelapheni ezinye zezimpawu ezijwayelekile zezimo zesikhumba, njengokuma kanye nokunwaya. Izici ezilwa nokuvuvukala zethembekile Umthombo ye-CBD ingasiza kakhulu ekunciphiseni izimbangela ze-eczema, i-dermatitis ne-psoriasis.
Njengoba uwoyela we-CBD ungasiza ukuthambisa isikhumba futhi unciphise ukubonakala kokucasuka, kungasiza abantu abanesikhumba esibucayi.
Funda kabanzi nge-CBD ne-psoriasis lapha.
I-CBD Yokuguga Nemibimbi
Ucwaningo lwango-2017 lwethenjwa Umthombo igcizelela izici ze-antioxidant ze-CBD. Ukucindezeleka okwexubileUmthombo Othembekile kungaba nomthelela enqubeni yokuguga. Ngakho-ke, izakhiwo ze-antioxidant nezokulwa nokuvuvukala zethembekile Umthombo we-CBD kungasiza ukuvimbela ukubukeka kokuguga esikhunjeni.
Ukhilimu Wokuguga we-CBD
Njengoba isitshalo se-cannabis singaqukatha ukwethenjwa Umthombo izakhiwo ezibulala amagciwane nezokulwa nezifo, kungasiza ekwelapheni izifo esikhunjeni.
Ngeminye imininingwane nezinsizakusebenza ku-CBD kanye Imikhiqizo ye-CBD yokunakekelwa kwesikhumba, sicela uvakashele ihabhu lethu elizinikele.
Ngokwe-World Health Organisation (WHO)Umthombo Othembekile, Abantu bavame ukubekezelela i-CBD kahle. Kodwa-ke, eminye imiphumela emibi ejwayelekile ye-CBD, engaxhomeke kumthamo, ingafaka okuthembekile Umthombo:
ushintsho ekudleni nasekukhulupheni
Kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi i-CBD ingaxhumana nayo Umthombo Othembekile ngemithi ethile, ngakho-ke kubalulekile ukuthi abantu abathatha imishanguzo kadokotela bakhulume nodokotela wabo ngaphambi kokusebenzisa noma yimiphi imikhiqizo ye-CBD.
Nganoma yimuphi umkhiqizo we-CBD, kubalulekile ukulandela imiyalo kwilebula nokupakishwa ukuze unqume ukuthi uwusebenzisa kangaki umkhiqizo, ukuthi uwusebenzisa kangakanani, nokuthi uwusebenzisa kanjani.
Abantu bangafaka uwoyela we-CBD nemikhiqizo yobuhle equkethe uwoyela we-CBD ngqo esikhumbeni.
Funda kabanzi mayelana nezihloko ze-CBD lapha.
Ukuthatha uwoyela we-CBD ngomlomo, abantu bangafaka amaconsi ambalwa ngaphansi kolimi lwabo, lapho bengabamba khona uwoyela imizuzu eyodwa ngaphambi kokugwinya.
Umthamo uzohluka ngokuya ngesisindo somzimba womuntu namandla kawoyela we-CBD. Abantu abasha ku-CBD kufanele baqale ngomthamo ophansi kakhulu ongaba khona. Lapho sebazi ukuthi umzimba wabo uphendula kanjani ku-CBD, bangakhuphula kancane umthamo.
Funda kabanzi ngemithamo efanele ye-CBD lapha.
Ukuphathwa Kwezokudla Nezidakamizwa (i-FDA)Umthombo Othembekile okwamanje ayilawuli imikhiqizo ye-CBD. Ngakho-ke, sincoma ukuthi abantu babheke imikhiqizo kawoyela ye-CBD:
aqukethe okungadluli ku-0.3%Umthombo Othembekile I-THC, ngokoMthetho Wokuthuthukiswa KwezolimoUmthombo Othembekile
babe nobufakazi bokuhlolwa okuvela eceleni yi-ISO / IEC 17025-laboratory egunyaziwe
phasa izivivinyo zemithi yokubulala izinambuzane, izinsimbi ezisindayo, isikhunta, kanye namagciwane
phasa ukuhlolwa kwamandla emikhiqizo nokuhlolwa kokuphepha
akuveli enkampanini engaphansi kwencwadi yesixwayiso ye-FDA ethembekile Umthombo
zivela enkampanini enikezela ngezitifiketi zokuhlaziywa (i-COAs) zayo yonke imikhiqizo yazo
Ngokwengeziwe, abantu bangacabanga futhi:
idumela lomthengisi nomenzi
Eminye imithi yesikhumba yemvelo
Amanye amakhambi emvelo esikhumba angasiza impilo yesikhumba noma anciphise izimpawu zezimo zesikhumba afaka:
I-aloe vera iyisithambisi esihle kakhulu futhi inezinto ezilwa nokuvuvukala, i-antimicrobial, nezindawo zokupholisa amanxeba. Izifundo ezivela ku-2014 no-2017 ziphakamisa ukuthi i-aloe vera inganciphisa izimpawu zombili induna ne-psoriasis.
Ukubuyekezwa kwango-2012 kuthenjiwe Umthombo uphawula ukuthi uju ukhombise ukuthambisa, ukuphulukisa nezakhiwo ezilwa nokuvuvukala. Ukubuyekezwa kuka-2016 kuphakamisa ukuthi kungaphinde kukhulise amasosha omzimba, ngenkathi ukubuyekeza okungu-2017 kuthembekile Umthombo kukhombisa ukuthi uju uyakwazi ukwelapha ukusha namanxeba.
I-athikili ka-2016Umthombo Othembekile ichaza ukuthi uwoyela kakhukhunathi uyindlela yokwelapha ephumelelayo yesikhumba esomile, ngoba ingathuthukisa kakhulu isikhumba samanzi. Ucwaningo lwango-2019 luphawula nokuthi uwoyela kakhukhunathi ungavikela isikhumba ngokulwa nokuvuvukala nokwenza ngcono impilo yesithiyo sesikhumba.
amafutha Tea tree
Ukubuyekezwa kwango-2013 kuthenjiwe Umthombo ikhomba amandla elwa nokuvuvukala, elwa namagciwane, nawokupholisa amanxeba. Ukubuyekezwa kuka-2015 kuphawula ukuthi uwoyela womuthi wetiye yindlela yokwelapha esebenzayo yezinduna, kunciphisa inani lezilonda zomqubuko kubantu abanezinduna eziphakathi nendawo.
Ucwaningo luphakamisa ukuthi uwoyela we-CBD kungenzeka ukuthi wasetshenziswa njengokwelashwa kwezimo ezahlukahlukene zesikhumba, njenge-acne, i-dermatitis ne-psoriasis. Lokhu kungenxa yamandla ayo wokulwa nokuvuvukala, ama-antibacterial, kanye ne-antioxidant.
Abantu bangafaka uwoyela we-CBD ngqo esikhunjeni sabo, bawudle, noma basebenzise imikhiqizo yobuhle be-topical, njengokhilimu noma ama-lotion, aqukethe uwoyela we-CBD.
* Lezi zitatimende azikaze zihlolwe yi-Food and Drug Administration. Le mikhiqizo ayihloselwe ukuxilonga, ukwelapha, ukwelapha noma ukuvimbela noma yisiphi isifo.
Izimpendulo Zezokwelapha ngeDelta 8 THC neDelta 10 THC Kusuka Ku-Intanethi